Toeram-pidiam-bahoaka ho an'ny tontolo iainana faran'izay vita nataon'i ZNZK China - ZNZK
Tamin'ny faran'ny taona 2017, ny governemanta Tibet dia nanome lanja lehibe ny fananganana ireo tetik'asa “revolisiona amin'ny kabine”, ary niezaka nandresy ny olan'ny fanadiovana kabine tany amin'ny faritra tsy ampy rano. Nikasa ny hanamboatra trano fidiovana 1 934 izy amin'ny faran'ny taona 2018.
Rehefa jerena ny tontolo iainana ara-jeografia, ny toetr'andro, ny fomba fizahana ary ny anton-javatra hafa, dia nofaritan'ny governemanta Tibet ara-tsiantifika ny fenitra fananganana, ny endrika ary ny haitao mba hahazoana antoka fa ny trano fidiovana vaovao dia tsy mamaly fotsiny ny tena filana fa maharitra, tsara tarehy ary madio. Hatramin'izao, 456 ny tetik'asa “revolisiona amin'ny kabine” natsangana tao amin'ny distrika, ary 270 no vita.
Manoloana ny tontolo ara-jeografika manokana an'i Tibet dia nanjary kabine ny trano fidiovana noho ny tombony manokana ananany toy ny fitsitsiana rano, fanosorana mora, tsy fanakanana ary tsy fofona hafahafa.
Ny laharam-pahamehana amin'ny revolisiona.
ZNZK dia mpanamboatra mpanamboatra fantsom-bitsika mitahiry rano any Shina.
Endri-javatra: rano 0,5L isaky ny flush; tsy misy fofona; mora ny mametraka sy mitazona.
Misy liana ve? azafady mifandraisa amin'i Ms Qing: qing@znzkcn.com
Fotoana fandefasana: 26-05-2021